Ciidamada Puntland oo ka baxay aaga Tukaraq | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Ciidamada Puntland oo ka baxay aaga Tukaraq
Ciidamada Puntland oo ka baxay aaga Tukaraq
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya Dhaqan gelinta Dhex-dhexaadintii laga dhexwaday Puntland iyo Somaliland Kadib markii dhowaan ay Garoowe iyo Hargeysa tageen Xubno ka socday IGAD Iyo UNSOM.
Iyadoo Qoraal kasoo baxay uu Nuxurkiisu ahaa “in deegaanka Tukaraq ee dagaalku ka dhacay ay noqoto meel ka caagan ciidamada labada dhinac”
Somaliland waxay oggolaatey in ay dib ugu noqoto halkii ay joogeen ka hor 8 Janaayo 2018, laakiin Puntland oo joogtey 8 Janaayo Tukaraq heshiisku ma dhigaayo inay dib ugu noqon karaan halkaas, waxaana la doonayaa in Tukaraq ay noqoto meel ka caagan ciidamada ama Buffer zone.
HADABA INTAASI KADIB , MAXAA KA CUSUB DEEGAANKA ?
Qodobadii ay beesha caalamku ku dhexdhexaadisay labada maamul ee Puntland iyo Somaliland ayaa qayb ka mid ah dhinaca Puntland laga fuliyey, ilo xog ogaal u ah jiida labada dhinac isku horfadhiyaan ayaa waxa ay xaqiijiyeen in hubkii cuslaa Puntland dib ugu soo celisay magaalada Garoowe iyada oo todobaadka soo socda arrimaha ugu mihiimsan labada dhinac fulin doonaan.
Qodobada ugu horeeya ee la fulin doono ayaa ah in malayshiyaadka labada maamul la kala raro oo mid walba qiyaastii 10-15Km goobaha ay hada kala joogaan laga qaado, si qodobada kale loo fuliyo.
Arrinahan ayaa waxaa iska kaashanaya dawlada federaalka, IGAD, Qaramada Midoobay iyo dawladda Ingiriiska oo balan qaaday in ay bixindoonto adeeg kharashaadka lagu fulinayo heshiiska labada dhinac ogolaadeen.
Maamulka Puntland ayaa bilihii ugu danbeeyey cadaadis lagu saarayey inaanu wax talaabo ah qaadin iyada oo uu Cabdiwali Gaas artintaasi ku guulaystay, ayna yaraatay abaabulkii iyo hadaladii kululaa ee Maamulka Puntland hawada marin jiray.
Ciidamo tiro badan ayaa dib uga soo noqotay goobihii hore loogeeyey iyada ay dib ugu noqdeen magaalooyinkii ay ka yimaadeen, magaalada Garoowena waxaa aad looga dareemayaa ciidankan oo goobaha lagu Qayilo dhooban.